သူတို့လို ပျော်မိသည် … | Layma's World
Filed under: Cartoons, Personal, Tag, That's what I wanna say, Wondering |
« စိတ်..စွပ်.. ( ၃) အမှတ်တရ … ဒီ … ၃၁ … »
နှင်းဆီနီနီ, on December 29, 2007 at 9:25 pm said:
မလေးမလည်း ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။ နှစ်သစ်မှာ ချစ်သူနဲ့လည်း အဆင်ပြေ ပါစေဗျာ။(အခုအဆင်မပြေဘူးလို့ အဆိုလိုပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေ စေချင်လို့ဆုတောင်းပေးတာပါ။ ဟတ်ဟတ်ဟတ် )
jerry, on December 29, 2007 at 10:27 pm said:
ဝေး ….. ကာတွန်းမဖတ်ရတာ ကြာပကွ ။ လာဟ! ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာ
ပျော်စရာကြီး ။ ပြီးကာမှ ဆော်ပလော်တီးထားတာတွေ့တော့တယ် ။ ခေါင်းကို ပုဝင်သွားပဲ ။ ဂုတ်တိုဆိုလို့ … အဟွန်း ဟွန်း ။
ဂုတ်တိုတစ်ကောင်ပျောက်နေတယ်ဆိုတာက ဒီလိုလေ …. ဟိုတလောလေးကပေါ့ ။ လူတွေက ဂုတ်တိုတို့ လည်ပင်းမှာ စာတွေလာဆွဲလိုက်၊ ဓာတ်ပုံတွေ လာချိတ်လိုက် ၊ လည်ပတ်အနီတွေ လာပတ်ပေးလိုက်လုပ်ကြတာလေ ။ အဲဒီမယ် ဟိုလူတစ်အုပ်က(လူဟုတ်မဟုတ် စစ်မစစ်တော့ မသိပါဘူး) ဂုတ်တို တို့ တတွေကို ဖမ်းဟယ် ဆီးဟယ် ရိုက်ဟယ် နှက်ဟယ် မကိုက်ရုံတမယ် လုပ်ကြလို့ ဂုတ်တို တို့ ခဗျာ ပြေးဟယ် လွှားဟယ် ပုန်းဟယ်ရှောင်ဟယ်နဲ့လေ ။ ဟူး …. မောတယ်။ ကံကောင်းလို့ပြန်တွေ့ရတယ်မှတ် ။ စိတ်နာတာကတော့ အဲဒီ လူမဟုတ်ဘာမဟုတ်တွေနဲ့ ခိုင်းနှုင်းခံရတာပဲ ။ ဟွန်း ..ခွေးသိက္ခာကျတယ် ။
မတိုင်ကြေးနော် ..အဟီး 🙂
kthuyien, on December 30, 2007 at 4:40 am said:
ကာတွန်းလာဖတ်သွားတယ် …. အာခီကျောင်းသူ မမလေးရေ…
Happy new year u too!!!!!!
မောင်မျိုး, on December 30, 2007 at 11:23 am said:
တီလေးရေ့..ဂေါ်မစွံလူပ်ျိုလေးများလဲ စွံပါစေကြောင်းမပါဘူးလားဗျ။… အရည်မရ အဖတ်မရ … ချောက်တီးချောက်ချက် စာတွေကမှ ဖတ်လို့ ကောင်းတာ နောက်လဲ အမြဲလာဖတ်ပြီး အားပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ…တီလေးလဲ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်မှု အပေါင်းခ၀န်ညောင်းပြီး သကာလ ချစ်စရာ ရတနာလေးများလဲ များများရပါစေလို့နှစ်သစ်အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ.်ဗျာ..
ပျော်ရွှင်ပါစေ ..ကောင်းကင်ကြီး နေကောင်းလားးး
tu tu, on December 30, 2007 at 1:44 pm said:
စစ်ကြီးမတိုင်ခင်ရော စစ်ကြီးပြီးမှရော လာရောက်ဝါးမျိုနေပါတယ်။
ကင်းကောင်ကြီးနဲ့ အိုအောင်မင်းအောင် ကြောင်မျိုးပြောတဲ့ ရတနာလေးတွေအများအပြားနဲ့
nu-san, on December 30, 2007 at 2:52 pm said:
လေးမ နဲ့အတူ ကောင်းကင်ကြီးလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ.. 😀 ကာတွန်းလေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်.. အမကတော့ လေးမရဲ့ စာတွေ မဖတ်ရရင် မနေနိုင်ပါ…ဒါကြောင့် ဖိတ် ဖိတ် မဖိတ်ဖိတ်၊ အိမ်ပြောင်းတိုင်းကို လိုက်မှာပဲ… 😀 😀
nyo, on December 30, 2007 at 6:17 pm said:
“not justanew year butabetter year”
sparrow, on December 30, 2007 at 8:20 pm said:
သဇင်ဏီ, on December 31, 2007 at 7:45 am said:
သွပ်သွပ်က တို့မကြီးရဲ့ အရေးအသားတွေကို တစ်ကယ်ကြိုက်လို့လာဖတ်တာနော်…
ဘူပြောတုန်း အရည်မရ အဖတ်မရ ချောက်တီးချောက်ချက်လို့.. အဲဒီလူကို ခေါ်လာခဲ့… အအေးတိုက်ပြီး သေချာရှင်းပြလိုက်မယ်… ဟီး 😀
သဉ္ဖာ, on December 31, 2007 at 8:44 am said:
“လေးမ အဖွဲ့သား”.. ဟိဟိ.. 😀
အစ်မကို စသိတာ အဲဒီ ကိုပြူးနဲ့ မပြုးံက စတာဘဲ.. အိမ်ကလည်း ခဏခဏပြောင်းလွန်းလို့ မနည်း ပြန်လိုက်ရှာရတယ်..၂၀၀၇ က စပြီး အစ်မ ဘာရေးရေး ရေးသမျှ ဆက်ပြီး အားပေးနေဦးမှာ…
tzm, on December 31, 2007 at 10:55 am said:
သြော်… ကိုဂျယ်ရီတောင် ပြန်ရောက်ပြီလားဗျ… မတွေ့တာတောင် ကြာပေါ့.. အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာ…
မမလေးရေ… ကျွန်တော်ဘယ်မှ မရောက်ရင်တောင် မမလေးဆီတော့ ရောက်အောင်လာဖတ်ပါတယ်.. အမြဲအားပေးနေပါတယ်…
Sparrow, on December 31, 2007 at 11:46 am said:
မျှားပြာ, on January 2, 2008 at 10:55 pm said:
အဲဒီကာတွန်းလေးကို တွေ့ တော့ လေးမ ကျွန်တော့်ကို ဖတ်ခိုင်းတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်ကို ပြန်သတိရသွားတယ် … အဖွဲ့ သားတော့ လုပ်ဖူးနော် ..
ခေါင်းရှောင်ပဲ လုပ်မှာဗျ ..း)
layma, on January 4, 2008 at 3:33 pm said:
>နှင်းဆီ… ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ..။
>ဂျယ်ရီ… ဂုတ်တို မကျေနပ်ရင် .. ဟိုကို စာရေးပြီး တိုင်လိုက်လေ…။
>မောင်မျိုး… လူပျိုလေးတွေ မပါဘူး..။ သူတို့က အချိန်ရှိသေးတယ်..။ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ..။
>မတူးတူး… လှေလှော်ရမှာလား…။ ဟုတ်..။
>မနုစံ…ဟဲ..ဟဲ..နောက်ခါပြောင်းရင် အရင်ဖိတ်မှာ..။ ဟီး..မပြောင်းဖြစ်အောင်စိတ်ထိန်းထားပါတယ်..။
>ညို…Thank You !!!
>စာကလေး.. me too.. thank u !! ရေးပြီးပြီနော်..။
>သဇင်ဏီ… တကယ် အအေးတိုက်မှာလား..။ အဲဒီလူက လေးမ လေ…။
>သဉ္ဇာ… အဖွဲ့ သားလေးကလည်း ကာတွန်းကြိုက်တယ်ပေါ့လေ…။ ၂၀၀၇ က ပြီးခဲ့ပြီ…။
>ကိုသန့်… မအားတဲ့ကြားက ရောက်အောင်လာပြီး မှတ်ချက်တွေ ရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ..။
>မျှားပြာ…ဒီမှာက ခေါင်းရှောင်မထားဘူး..။ လေးမ အပါအ၀င် အားလုံးက အဖွဲ့ သားဆိုတော့ ဘီလိုရုတ်မလဲ…။
ဇီးကွက်, on January 5, 2008 at 1:04 pm said:
ခရီးတွေသွားနေတာကော။ နှစ်သစ်မှာ အလုပ်ဟောင်းတွေကို ရှင်းနေတာကော ၊ အဲဒါတွေရှုပ်နေတာနဲ့ပဲ အိမ် မလည်ဖြစ်ဘူး။ အခုမှ အကြွေးတွေလိုက်ရှင်းနေတာ။ 🙂 အဖွဲ့သား အဖြစ် သတ်မှတ်တာကျေးဇူး။ နှစ်သစ်က စပြီး နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ တောင်ကြီးသားနဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဂျေ, on January 6, 2008 at 4:03 pm said:
ညီမလေးရေ …..မွှား…. အွန်လိုင်းမှာတွေ့ ရင် ချက်(ချဲ)ရအောင်
ဝေလေး, on July 16, 2008 at 4:39 pm said:
လေးမ၏ အရည်မရ အဖတ်မရ … ချောက်တီးချောက်ချက် … စာမျိုးစုံတဲ့……